1990 – Year – Channel Myanmar
Die Hard2(1990) Die Hard2(1990) IMDb - 7.2/10_____ Rotten Tomatoes - 68% ခရစ်စမတ်နဲ့ နယူးရီးယားနီးလာလို့ ဘာဇာတ်ကားကြည့်မလဲဆိုရင် ကျွန်တော်ကတော့ Die Hard ဇာတ်ကားတွေကိုပဲ ပြေးမြင်ပါတယ်။ မင်းသားကြီး ဘရုစ်ဝီလီ ရဲ့အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတွေလို့ဆိုရင်လဲ Die Hard ဇာတ်ကားတွေကိုပဲ အရင်ဆုံးပြေးမြင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော် ကလေးဘဝကတည်းက ကာတွန်းဒီရဲဂျာရဲ့ ကာတွန်းတွေဖတ်ရင်း ဒီဇာတ်လမ်းတွေကိုရင်းနှီးနေပါတယ်....နည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာတော့ ဇာတ်ကားတွေကိုမျက်မြင်ကြည့်ရတော့လဲ ထိုင်ရာမထကြည့်မိတာချည်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့် တုံးတိုက်တိုက်ကျားကိုက်ကိုက် စိတ်ထဲရှိသလိုပြောတတ်တဲ့..... အကြောက်အလန့်ကင်းတဲ့..... ဂျွန်မက္ကလိန်းဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်ကို ပြသနာတွေ အန္တရာယ်တွေကြုံတိုင်း..သိမ်ငယ်စိတ်တွေဝင်လာတိုင်း အမှတ်ရမိတာ အမှန်ပါ။ Die Hard ဇာတ်ကားတွေဟာ အခုချိန်ထိ စုစုပေါင်း ၅ ကားထွက်ထားပါတယ်။တစ်ကားနဲ့တစ်ကားဟာ အနည်းငယ်တော့အဆက်အစပ်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့် ၅ ကားလုံးကိုစုစည်းတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။တစ်ကားချင်းစီရဲ့အညွှန်းတော့မပေးတော့ပါဘူး။မိတ်ဆွေတို့ကြည့်ဖူးပြီးသားဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဂျွန်မက္ကလိန်းရဲ့ အရသာကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လည်ခံစားကြည့်ကြပါဦး။သေချာပေါက် အရသာရှိနေဦးမှာပါ။ BluRay 1080p 5.1 Audio နဲ့ ပြန်လည်တင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ File Size…(2 GB) and (1 GB) Quality…Blu-Ray ...
Look Out, Officer! (1990) ဟာသဘုရင်ကြီး Steven Chow ရဲ့ ၁၉၉၀ ကဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အထာကျကျ ဆရာကြီး ရဲအရာရှိ Biao တစ်ယောက် မူးယစ်ဆေးဂိုဏ်းတစ်ဂိုဏ်းကိုတစ်ကိုယ်တော်ဝင် ဖြိုခွင်းရင်း အသတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။လောင်းကစားလုပ်တတ်တဲ့ ဝါသနာဆိုးကြောင့် သူ့ကိုလောင်းကစားကျွေးမပေးနိုင်လို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေသွားတာလို့ပဲအားလုံးကထင်ကြတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ သေဆုံးမှုအကြောင်း အမှန်အတိုင်းဖြစ်စေဖို့ လူပြည်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာ သူ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်မယ့် ရဲသားသစ် Sing(Steven Chow) ကိုတွေ့ပြီး သူ့အတွက်လက်စားချေပေးပြီးသူ့ရဲ့နာမည်ကို ပြန်လည်သန့်ရှင်းပေးရင် Sing အတွက် ရာထူးတိုးပြီး ကောင်မလေးနဲ့ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး အပေးအယူဖြစ်သွားကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ဘာတွေတလွဲတွေဖြစ်မလဲ ဆိုတာ ပါးစပ်မပိတ်ရအောင် ရယ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။IMDB Rating ကတော့ 6.1 ရှိပါတယ်။(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ d3mon ပါ)++++++++++++++ကျွန်တော့် Idol ကြီး စတီဖင်ချောင်ရဲ့ ဇာတ်ကားအကုန်လုံးကို 1080p BluRay Quality နဲ့တတ်နိုင်သမျှ ပြန်လည်စုစည်းတင်ဆက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။တင်ပြီးသမျှကို https://channelmyanmar.org/category/stephen-chow/ မှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ File size…(1.9 GB) and (1 GB) Quality….BluRay ...
Vincent & Theo (1990) Vincent And Theo (1990)၁၉ရာစု၀န္းက်င္မွာ ေပၚေပာက္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းရဲ့ လူသိအမ်ားဆံုး ပန္းခ်ီဆရာ ပန္းခ်္ီကို ရူးသြပ္ၾကသူတိုင္း ခ်စ္ျမတ္ၾကတဲ့ ပန္းခ်ီဆရာ ဗင္းဆင့္ဗန္ဂိုးအ‌ေၾကာင္းကို တင္ဆက္ရိုက္ကူးထားတဲ့ ရုပ္ရွင္ေတြဆိုတာလည္း မနည္းေတာ့ပါဘူး။ CMမွာတင္ ေလးငါးကား တင္ဆက္ၿပီးပါၿပီ...ဗင္းဆင့္ကား အမ်ားစုဟာ ဗင္းဆင့္ရဲ႕ ဒုကၡေတြကိုပဲ ျပသြားတာမ်ားေပမယ့္ ဒီ ကားမွာေတာ့ (မေသခင္မေအာင္ျမင္ခဲ့ တစ္ျပားမွမရခဲ့တဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြဟာ ေသလြန္ဆံုးပါးၿပီးတဲ့ေနာက္ တစ္ကား ၆၆သန္းအထိရခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ေနာက္ကြယ္က ဗင္းဆင့္အေပၚ ဗင္းဆင့္ရဲ႕ညီ သီအိုဗန္ဂိုးရဲ႕အနစ္နာခံခဲ့မႈေတြကို ဒီ႐ုပ္႐ွင္မွာေတာ့ ေသခ်ာျပသသြားပါတယ္။)"ဘယ္ေနရာမဆို တစ္ဖက္စြန္းေရာက္ရင္ တစ္ေယာက္ေတာ့ နစ္နာရစျမဲ"ဆိုတဲ့ စိုင္းခမ္းလိတ္ရဲ႕ စာသားကေလးလိုပါပဲ။အႏုပညာကို တစ္ဖက္စြန္းေရာက္႐ူးသြပ္လြန္းတဲ့ ဗင္းဆင့္အတြက္ နစ္နာရတဲ့လူတစ္ေယာက္႐ွိခဲ့တယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီလူက သီအိုပါပဲ။ဒီကားမွာ ဗင္းဆင့္အေၾကာင္းေျပာရင္ မပါမျဖစ္တဲ့လူေတြျဖစ္တဲ့ ပန္းခ်ီဆရာ ေပါေဂၚဂင္တို႔ ေဒါက္တာဂါးခ်က္တို႔နဲ႔ ဗင္းဆင့္ဆက္ဆံေရးကို လက္ေတြ႕ဆန္ဆန္ျပထားသလို...ဗင္းဆင့္ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္အေၾကာင္းအရာေတြျဖစ္တဲ့ ျပည့္တန္ဆာမကိုႀကိဳက္တာေတြ နားရြက္ျဖတ္တာေတြ စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ုံသြားရတာေတြကို လက္ေတြ႕နဲ႔ အနီးစပ္ဆုံးျပထားပါေသးတယ္။သီအိုရဲ႕ အလုပ္ျဖစ္တဲ့ ထိုေခတ္ထိုအခါက ပန္းခ်ီကား ေရာင္းဝယ္မႈအေၾကာင္းကိုလည္း ...
GoodFellas(1990) GoodFellas(1990)အညြွန္း *********************** IMDb...8.7,,,,Rotten....96% (unicode)IMDbရဲ့ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ကား (၂၀) စာရင်းထဲမှာပါတယ်....တကယ့်အဖြစ်မှန်ကို အခြေခံရိုက်ကူးထားပါတယ်..ဒါရိုက်တာMartin Scorsese ရဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ရာထဲက တစ်ကားပါ... အော်စစကာ တစ်ဆုရရှိခဲ့ပြီး အခြားဆုပေါင်း (၄၄)ဆုလည်း ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်...ဒီကားကို အညွှန်းမရေးပါရစေနဲ့... ရေးဖို့လည်းမစွမ်းသာတဲ့ကားမို့ပါ... ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျို့..ဘာသာပြန်သူကတော့ Thaw Thaw Wai Oo ပဲဖြစ်ပါတယ်......(zawgyi)IMDbရဲ႕ အေကာင္းဆုံး ႐ုပ္ရွင္ကား (၂၀) စာရင္းထဲမွာပါတယ္....တကယ့္အျဖစ္မွန္ကို အေျခခံ႐ိုက္ကူးထားပါတယ္..ဒါ႐ိုက္တာMartin Scorsese ရဲ႕ အေကာင္းဆုံးလက္ရာထဲက တစ္ကားပါ... ေအာ္စစကာ တစ္ဆုရရွိခဲ့ၿပီး အျခားဆုေပါင္း (၄၄)ဆုလည္း ဆြတ္ခူးခဲ့ပါတယ္...ဒီကားကို အၫႊန္းမေရးပါရေစနဲ႔... ေရးဖို႔လည္းမစြမ္းသာတဲ့ကားမို႔ပါ... ခံစားၾကည့္လိုက္ပါဦးဗ်ိဳ႕..ဘာသာျပန္သူကေတာ့ Thaw Thaw Wai Oo ပဲျဖစ္ပါတယ္......File Size : (1.12 GB) and (407 MB) Quality : Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…02:26:00 Genre : Crime , Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated ...
The Hot Spot (1990) IMDb (6.4) / Rotten Tomatoes (71%)ဟယ်ရီမက်ဒေါ့စ်ဟာ တက္ကဆက်က မြို့ငယ်လေးတစ်ခုကို အခြေလာချတဲ့ တစ်နယ်သား တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ နောက်ကြောင်းကို ဘယ်သူမှ မသိရသလို ဘာအကြံအစည်တွေသယ်ဆောင်လာမလဲ မယုံကြည်ရသူတစ်ယောက်။ ကားဟောင်း အရောင်းသမားတစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေရင်း ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူရဲ့ ဇနီးနဲ့ ပွေရှုပ်သလို စာရင်းကိုင်မိန်းမလှလေး ဂလိုရီယာ(ဂျနီဖာကော်နယ်လီ)ကိုလဲ အလွတ်မပေးပါဘူး။ တကယ်တမ်း သူ့ရည်ရွယ်ချက်က မြို့ရဲ့ ဘဏ်တိုက်ကိုလုယက်ဖို့ပါပဲ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ စာရင်းကိုင်မိန်းမလှလေး ဂလိုရီယာဟာ မြို့စွန်မှာ နေထိုင်တဲ့ ခပ်ပေပေလူတစ်ယောက်ရဲ့ ငွေညှစ်ခြိမ်းခြောက်မှုကို ခံနေရပါတယ်။ ဒါတွေရဲ့ နောက်ကြောင်းက ဘယ်လိုရှိလဲ။ နယ်လှည့်ပြီး ဖျံကျလာတဲ့သူတစ်ယောက်အတွက် ဒီနယ်မြို့ငယ်လေးမှာ သူ့ထက်လည်တဲ့သူ ရှိနေမလား။ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ လူတစ်စု တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ပိပိရိရိလှည့်ဖျားကြပုံတွေကိုစိတ်ဝင်စားစရာမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဂျနီဖာကော်နယ်လီဆို တစ်လောတုန်းက gif တွေမှာ ခေတ်စားသွားတဲ့ သိပ်လှတဲ့ မမတစ်ယောက်မြင်းစီးနေပုံလေးကိုမှတ်မိကြမှာပါ။ အဲ့ဒီကားတုန်းက ဘာဆိုဘာမှ မပါလို့မကျေနပ်ကြသူတွေ ဒီကားမှာတော့သူ့ရဲ့ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းအလှတွေတစ်ဝကြီးမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် မိသားစုနဲ့တူတူကြည့်ဖို့တော့မသင့်တော်တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ File size…(1.2 GB) Quality….Blu-Ray Rip 720p Format…mp4 Duration….02:10:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung Translated ...
Ghost ( 1990 ) ချစ်တတ်တဲ့သူတိုင်းခံစားတတ်မှာပါ1990 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Ghost ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အော်စကာ ဆုလည်း ၂ဆု ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလေးပါပဲဒါရိုက်တာ Jerry Zucker က ရိုက်ကူးထားပြီးမင်းသားကြီး Patrick Swayze နဲ့ မင်းသမီး Demi Mooreတို့တွဲဖက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ အချစ် နဲ့ ရိုမန့်ဆန်ဆန်သရဲဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်...2009 ခုနှစ်မှာသေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့Patrick Swayze ရဲ့ အလွမ်းပြေကြည့်ရမယ့်ဇာတ်ကားပါဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ...အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ဆမ်နဲ့မော်လီ တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်မှာသူငယ်ချင်း ကားလ် ဆိုတဲ့သူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်..နှစ်ယောက်လုံးကလည်းကားလ် အပေါ်မှာယုံကြည်ကြပါတယ်..တစ်နေ့မှာ ဆမ်က သူ့ရဲ့ စုထားတဲ့ဘဏ်ငွေစာရင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာလေးသန်းရှိကြောင်းကို ကားလ်ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြလိုက်ပါတယ်..အဲ့နေ့ညမှာပဲ ဆမ်နဲ့မော်လီရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရာမှ အပြန် အကြမ်းဖက်လုယက်သူတစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဆမ်က ပြန်လည်ခုခံရင်းနဲ့အကြမ်းဖက်သမားရဲ့ သေနတ်ကျည်ထွက်ပြီး ဆမ် သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်..အဲ့ဒီ့နောက်မှာတော့ဆမ် က သူ့ဇနီးမော်လီ အနားမှာနေချင်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံကိုမတက်နိုင်ပဲ ရှိနေပါတယ်ဝိညာဉ်ဘဝမှာ သင်ယူစရာတွေ..တတ်မြောက်စရာတွေနဲ့အတူသူ့ဇနီးမော်လီကိုလည်းဆက်စောင့်ရှောက်နေရင်းကသူသေခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုသိရှိခဲ့တယ်.သူသေရတဲ့အကြောင်းအရင်းနောက်မှာသူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း ကားလ် ပါဝင်နေတာကိုသိရှိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ဆမ်ဘယ်လိုခံစားရမလဲသူချစ်ရတဲ့မော်လီကိုရော..ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါ....ဘာသာပြန်သူ Nu Mon ဖြစ်ပါတယ်Review & Encoder : LK--------------------------------------------------------------------------ခ်စ္တတ္တဲ႔သူတိုင္းခံစားတတ္မွာပါ1990 ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ႕တဲ႕ Ghost ...
Awakenings(1990) Awakenings(1990) IMDb...7.8,,,,Rotten ...88% ဆေးရုံတစ်ခုသို့ မဲလ်ကွန်ဆိုတဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်အလုပ်လာလျှောက်တယ်..... သူလျောက်တဲ့ရာထူးကတော့ ဦးဏှောက်နဲ့အာရုံကြောသုတေသနဌာအတွက် အလုပ်လာလျှောက်တာဖြစ်ပြီး ဆေးရုံကတာဝန်ရှိသူတွေသူ့ကိုအင်တာဗျူးတဲ့အခါမှာ သုတေသနနဲ့ပတ်သက်လို့ အတွေ့အကြုံပေါင်းများစွာရှိနေတာတွေ့ရှိကြတယ်.. သို့ပေမယ့် သူတို့ဟာ သုတေသနနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆေးရုံမှာမလိုအပ်ပေမယ့် ဆေးကျောင်းတက်နေစဉ်မှာ ဆေးကုဖူးတယ်မလားလို့မေးပြီး အလုပ်ခန့်လိုက်တယ်...မဲလ်ကွန်အနေနဲ့ အံအားသင့်စရာပေါ့ ...အပူချိန်တိုင်းတတ်တယ်..ဆေးထိုးတတ်တယ် ... ဒါဆိုအိုခေပေါ့ဆိုတဲ့ ဆေးရုံအုပ်ရဲ့မှတ်ချက်ကိုကြားရတော့ သူပျော်ရမလား ဝမ်းနည်းရမလားမသိ.... ဒီလောက်လွယ်လိမ့်မယ်လို့လည်းသူထင်မထားခဲ့ဘူး... နောက်နေ့ဆေးရုံလာလိုက်မှ သူသိသွားတော့တယ်..ဘာလို့ဆို သူကုသရမယ့်သူတွေဟာ နာတာရှည်ရောဂါသည်တွေ.. ပြောရရင် ရုပ်ပဲရှိပြီး နာမ်ပျောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုး... အိပ်တယ် ခွံကျွေးရင်စားတယ်...ဘာမှမတွေးတဲ့ လူနာတွေ... မျိုးစုံပင်...မဲလ်ကွန်အတွက်အားလုံးက အသစ်အဆန်းတွေကြီးဖြစ်သလို လူနာအမျိုးမျိုးရဲ့ တုန့်ပြန်မှုက သူ့ကို အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေခဲ့တယ်... တစ်နေ့တော့ ကျောက်ရုပ်လိုဖြစ်နေတဲ့လူနာတစ်ယောက်က လွတ်ကျသွားတဲ့မျက်မှန်ကို ဖတ်ခနဲဖမ်းလိုက်တာကို သူတွေ့သွားတယ်.. အဲ့ဒီနောက် တခြားလူနာတွေကို စမ်းကြည့်ရာ အလိုအလျောက်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တုန့်ပြန်နိုင်တာတွေ့ရှိသွားတယ်.. သုတေသနဆရာဝန်ပီပီ လူနာတိုင်းရဲ့ တုန့်ပြန်မှုလေးတွေကိုစမ်းသပ်ရင်း ကျောက်ရုပ်လိုဖြစ်နေတဲ့ ဒီလူနာတွေကို သူတတ်စွမ်းသရွေ့ တခြားသူတွေနဲ့တန်းတူ လောကအလှကိုခံစား နိုင်စေဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်... ဒေါက်တာမဲလ်ကွန် တစ်ယောက်အောင်မြင်ပါ့မလား...ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမလဲ... သူပြုလုပ်တဲ့ကုထုံးတွေကရော ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လား...ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး... ဒီကားက တကယ့်ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ပြထားတာပါ... တကယ့်ကိုတွေးစရာတွေ Message လေးတွေ ပေးပါတယ်...အဓိက သရုပ်ဆောင်(၂)ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီး Robert De Niroနဲ့ Robin Williams ကို တစ်ချို့သူတွေသိကြမယ်ထင်ပါတယ်.... ဒီကားဟာ အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆု၊မင်းသားဆုနဲ့ ဇာတ်ညွှန်းဆုတို့အော်စကာဆန်ကာတင်စာရင်းပါခဲ့တယ်...ကိုင်း ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး ------------------------------------------------------- ေဆးရုံတစ္ခုသုိ႕ မဲလ္ကြန္ဆုိတဲ့ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္အလုပ္လာေလွ်ာက္တယ္..... သူေလ်ာက္တဲ့ရာထူးကေတာ့ ...
Child’s Play2(1990) 1990 ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ child's play2ဖြစ်ပါတယ်....ဒီကားမှာတော့ Chucky ဘယ်လိုတွေဆိုးသွမ်းလာမလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးကြည့်ရတော့မှာပါ...File Size : (837 MB) and (294 MB) Quality : 720p Bluray Running Time : 1hr 24min Format : Mp4 Genre :Horror, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by d3mon Encode by Moe Myint Lwin
Misery (1990) စာရေးဆရာကြီး Stephen Kingရဲ့ Miseryဝတ္ထုကိုပြန်ရိုက်ထားတဒီရုပ်ရှင်ဟာ Horrorရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့ပြောစမှတ်တွင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ပါ။ဒီဇာတ်ကားထဲက စိတ္တဇအမျိုးသမီးကြီးနေရာကသရုပ်ဆောင်တဲ့မင်းသမီးကြီး Kathy Batesလဲ ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပဲ အော်စကာဆု၊ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုတွေ ရခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း >>>>စာရေးဆရာ ပေါလ်ရှယ်ဒန်က မစ္စရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်အကြောင်း အသားပေးရေးထားတဲ့လုံးချင်းဝတ္ထုတွဲတွေနဲ့ လူကြိုက်များအောင်မြင်တဲ့စာရေးဆရာကြီးတစ်ယောက်ပေါ့။ဒါပေမယ့် ကြာလာတော့ မစ္စရီအကြောင်းရေးရတာငြီးငွေ့လာလို့ ပေါလ်ရှယ်ဒန်က သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်မစ္စရီဝတ္ထုမှာ မစ္စရီဇာတ်ကောင်ကို သတ်ပစ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ ဝတ္ထုအသစ်ကို လူသူမနီးတဲ့ဟိုတယ်လေးမှာသွားရေးနေတုန်း သူ့သမီးလေးမွေးနေ့အတွက်နယူးယောက်ကိုပြန်အလာမှာ နှင်းမုန်တိုင်းမိပြီးကားမှောက်သွားခဲ့တယ်။ခြေတွေလက်တွေနံရိုးတွေကျိုးပြီး နှင်းမုန်တိုင်းထဲမှာသတိလစ်ပြီးသေစစဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကို အန်နီဝစ်ဆိုတဲ့မိန်းမကြီးကကယ်ဆယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။သတိရလာတော့ သူ့ကိုကယ်ခဲ့တဲ့အန်နီဝစ်ကသူနာပြုဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့မစ္စရီဝတ္ထုတွေကိုအရူးအမူးစွဲလမ်းအားပေးတဲ့အကြီးစားပရိတ်သတ်တစ်ယောက် ဖြစ်နေတာကြောင့်စိတ်သက်သာရာရခဲ့ပေမယ့်လဲ....စာရေးဆရာဟာ တဖြေးဖြေးနဲ့ဆိုသလိုအန်နီဝစ်ရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အပြုအမူတွေကိုသတိထားမိလာပါတယ်။ဒါ့အပြင် အန်နီဝစ်ဟာ မစ္စရီဇာတ်ကောင်ကိုပုံမှန်ထက်ပိုပြီးချစ်ခင်စွဲလမ်းနေတာကိုလဲသတိထားမိလာပြီး...နောက်ဆုံးထွက်မစ္စရီစာအုပ်မှာမစ္စရီသေသွားတာကို အန်နီဝစ်တစ်ယောက်သိသွားချိန်မှာ...ဒီဇာတ်ကားဟာ သွေးသံရဲရဲအခန်းတွေကြမ်းတမ်းတဲ့အသုံးအနှုံးတွေ ပါဝင်တာကြောင့်R ratedသတ်မှတ်ထားပါတယ်။Horrorရုပ်ရှင်တွေ မကြိုက်ရင်တောင်ဒီကားက Horror,Drama,psycho thrillerအချိုးကျကျပေါင်းစပ်ထားပြီး Kathy Batesရဲ့လက်ဖျားခါလောက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ပီပြင်မှုတွေကြောင့်ကြည့်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ယုတ္တိမရှိ ပေါပေါပဲပဲ jump scareတွေတစ်ကွက်မှမပါပဲကြည့်ရတဲ့သူကို ရင်တလှပ်လှပ်ဖြစ်စေမှာပါ။ဒါကြောင့် Horrorရုပ်ရှင်တွေကိုမြတ်နိူးသူတွေအဖို့Miseryဟာလုံးဝစိတ်ပျက်စေရမှာမဟုတ်ကြောင်း ကတိပေးလိုက်ရပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကားကို Kaung Khant Win က ဘာသာပြန်ပေးထားပြီးအညွှန်းကိုလဲကိုယ်တိုင်ရေးပေးထားပါတယ်
Pretty Woman (1990) IMDb (7/10)Pretty Womanဇာတ်လမ်းက အချစ် အပျော်လေးပေါ့။ escortမလေး (ခေတ်စားနေတဲ့ စကားနဲ့ဆို ရွှေကြာလေး) Vivian နဲ့ အကြောင်းအပေါင်းကြုံလို့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ချမ်းသာတဲ့ စီးပွားရေးသမား Edward တို့ရဲ့ ခေတ်သစ် စင်ဒရဲလားပုံပြင်လေး။ အဆင့်မတူ ကြီးပြင်းပုံမတူ အပြုအမူမတူတဲ့သူနှစ်ဦးရဲ့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး။ ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်တုန်းကတော့ Julia Roberts ချောလိုက်တာ Richard Gere က စိတ်ကူးယဉ်စရာ Prince on the White Horse ပေါ့။ ခုနောက်ပိုင်း ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေအကြောင်း ရုပ်ရှင်တွေ ထွက်လာတိုင်း Pretty Woman နာမည်ကို ပြန်ပြန်ဖော်လာကြတော့ နည်းနည်းထူးဆန်းသွားတယ်။ ကိုယ်ကြည့်တုန်းက ရွှေကြာဆင်ပယ်သိုက်ဇာ လို့ မခံစားခဲ့ရဘူးလေ။ အဲ့တာနဲ့ ပြန်ကြည့်မိတော့ နည်းနည်းမတူတာလေးတွေ တွေ့ရတယ်။ ကိုယ်လိုရာ ကိုယ်ဆွဲတွေးတယ်ပဲ ဆိုပါစို့။မင်းသမီးရဲ့ ဇာတ်ရုပ်အကြောင်းပဲ ကြည့်ကြတာပေါ့။ သူက လမ်းပေါ်က မိန်းကလေး ဒါမယ့် ပထွေးရန်က လွတ်အောင် ထွက်ပြေးလာတာတို့ ...
Happy Ghost4(1990) 1990 ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ႕တဲ႕ Happy Ghost4ၿဖစ္ပါတယ္.. Happy Ghost3ကိုလည္း ၿမန္မာစာတန္းထုိးအၿဖစ္နဲ႕ channelmyanmar မွာပဲ တင္ေပးခဲ႕ၿပီးပါၿပီ... ဒီကားက Happy Ghost3အေနာက္က ထြက္ခဲ႕တယ္ဆုိေပမယ္႕ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ေတြ ဘာမွဆက္စပ္မွဳမရွိပါဘူး. .အေၾကာင္းအရာသီးသန္႕သာၿဖစ္ပါတယ္...အေရွ႕တုန္းက ထြက္ခဲ႕တဲ႕ ၁ , ၂ , ၃ ကလည္းမင္းသားပဲတူၿပီး ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ တူညီၿခင္းမရွိလို႕ ၾကည္႕ရတာ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ၿဖစ္ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး ဒါေပမယ္႕ ဒီကားကို မၾကည္႕ခင္ Happy Ghost3ကိုအရင္ၾကည္႔ပါလို႕ ၾကိဳေၿပာပါရေစ ၾကည္႕ရတာပိုၿပီးအရသာရွိေအာင္ပါ...Happy Ghost Series ေတြက ၾကာလွၿပီၿဖစ္တဲ႕အတြက္ အၾကည္ကို ရွာဖုိ႕အရမ္းခက္ခဲပါတယ္ဒါေၾကာင္႕ ေတြ႕ဖူးသမွ်ထဲမွာ အၾကည္ဆံုး Version ကိုသာ ေဒါင္းၿပီးဘာသာၿပန္ရတာ ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ နည္းနည္းေတာ႕ ကြာလတီ ၀ါးပါတယ္..ခြင္႕လႊတ္ေပးၾကပါ အရင္အပိုင္းေတြရဲ႕ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကို ေၿပာရမယ္ဆုိရင္ ခ်င္မင္းဆက္ေခတ္တုန္းက လူတစ္ေယာက္က ပညာရွိစာေမးပြဲကို အၾကိမ္ၾကိမ္ေၿဖဆုိခဲ႕ေပမယ္႕ ေအာင္ၿမင္ၿခင္းမရွိပဲ..ေနာက္ဆံုးမွာ သူ႕မိန္းမကိုယ္တိုင္က ထားရစ္ခဲ႕လည္း စိတ္က်ေရာဂါၿဖစ္ၿပီးတဲ႕ေနာက္ဘုရားေက်ာင္းပ်က္ထဲမွာ ကိုယ္႕ကိုယ္ကိုယ္ ဆြဲၾကိဳးခ် သတ္ေသခဲ႕ပါတယ္ လူၿပန္၀င္စားခြင္႕မရပဲနဲ႕ ၾကိဳးေပၚမွာပဲ တြယ္ကပ္ေနခဲ႕ပါတယ္ တစ္ေန႕မွာ ၿမိဳ႕က ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လာေရာက္အပန္းေၿဖရာကေနၾကိဳးကိုသယ္ေဆာင္သြားၿပီး Happy Ghost က ၿမိဳ႕ကိုေရာက္ရွိသြားပါတယ္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ကေကာင္မေလးေတြနဲ႕ သိရွိၿပီး ဘ၀ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ေတြကို ေသခ်ာစြာ နားလည္သင္ယူႏိုင္ခဲ႕လို႕ လူၿပန္၀င္စားခြင္႕ရရွိခဲ႔ပါတယ္ ဒါက အပိုင္း ၁ ပါ.. အပိုင္း ၂ ကေန ...
A Chinese Ghost Story2( 1990 ) A Chinese Ghost Story 1 ရဲ႕အဆက္ပဲၿဖစ္ပါတယ္..1 မၾကည္႕ရေသးရင္ ဒီေနရာမွာသြားေရာက္ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္...လင္ခ်ိဳင္စံရဲ႕ ခ်စ္သူတေစၦမေလးစင္ခ်င္တစ္ေယာက္ ေနာက္ဘ၀ကိုကူးသြားၿပီးတဲ႔ေနာက္မွာေတာ႔ ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာကေန ဇာတ္လမ္းၿပန္ဆက္ၿပီးရိုက္ကူးထားပါတယ္..အေၾကြးလိုက္ေတာင္းတဲ႔အလုပ္အၿဖစ္တာ၀န္ယူရတဲ႔လင္ခ်ိဳင္စံတစ္ေယာက္ ဇာတိေၿမကို ၿပန္အေရာက္မွာအားလံုးအေၿပာင္းအလဲေတြၿဖစ္ကုန္ပါၿပီ..မတရားမွုေတြၾကီးစိုးၿပီး သရဲတေစၦေတြေပါမ်ားလွတဲ႔ နယ္ေၿမတစ္ခုမွာလင္ခ်ိဳင္စံတစ္ေယာက္ဘယ္လိုအသက္ရွင္ေအာင္ၾကိဳးစားရမလဲ..ၿပီးေတာ႔ စင္ခ်င္ နဲ႔ပတ္သတ္တဲ႔အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးဘယ္လိုဆက္မလဲဆုိတာေတာ႔ ဆက္လက္ခံစားၾကည္႕ရွုပါ1990 က ထြက္ရွိခဲ႔ေသာကားၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔တတ္ႏိုင္သေလာက္ ၾကည္ႏိုင္တဲ႔ ကြာလတီကိုရွာေဖြၿပီးတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ A Chinese Ghost Story 1+2+3 အကုန္လံုးကို ဒီမွာရွာႏိုင္ပါတယ္
A Chinese Ghost Story2( 1990 )
When Fortune Smiles (1990) မင္းသားၾကီး စတီဖင္ေခ်ာင္ ငယ္စဥ္က ဇာတ္ကားပါ...Action/Comedy/Romance အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။Action ဆိုလဲ လံုးဝမအိုင္ေအာင္ ခပ္မိုက္မိုက္ရိုက္ကူးထားပါတယ္။Comedy ဆိုလဲ အခြီျဖစ္ေအာင္ ရိုက္ကူးထားႏိုင္ပါတယ္။Romance ဆိုလဲ လံုးဝဟက္ထိေအာင္ ရိုက္ကူးထားပါတယ္။သူ႕ေနရာနဲ႔သူ ရသအစံုပံုေဖာ္ထားႏိုင္တဲ့ ဇာတ္ကားပါ။မင္းသမီးကလဲ ဇာတ္ရုပ္နဲ႔အလိုက္ ေဒါင္က်က် ျပားက်က် သရုပ္ေဆာင္ျပထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ဇာတ္ေၾကာင္းေလးကိုေတာ့ ခံစားအားေပးၾကည့္ၾကပါဦး။ File size…(999 MB) and (490 MB) Quality…Blu-Ray Rip 720p Format…mp4 Duration….01:30:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya AungTranslated by Khin Chan Myae Thu
The Godfather: Part III(1990) The Godfather: Part III(1990) IMDb...7.6,,,,Rotten...67% (ဒီကားက ယခင် ကျွန်တော် channelmyanmar မှ တင်ဆက်ပေးဖူးပါတယ်..သို့ပေမယ့် စာတန်းထိုးလိုအပ်ချက်တစ်ချို့ရှိလို့ ယခု အသစ်ဘာသာပြန်ပြီးတင်ဆင်ပေးထားပါတယ်…) Part III လာပါပြီ ...ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာ... ဒီကားရဲ့အညွှန်းကိုတော့ မရေးရဲလို့မရေးတော့ဘူး... ကိုင်းခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျို့...1080p 5.1CHနဲ့ 720p တို့အပြင် 360p လေးနဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံးတင်ပေးထားပါတယ်.. ဘာသာပြန်သူကတော့ Ko Zuel Khant Thwinပဲဖြစ်ပါတယ်... (ဒီကားက ယခင္ ကြ်န္ေတာ္ channelmyanmar မွ တင္ဆက္ေပးဖူးပါတယ္..သုိ႕ေပမယ့္ စာတန္းထုိးလုိအပ္ခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ရွိလုိ႕ ယခု အသစ္ဘာသာျပန္ၿပီးတင္ဆင္ေပးထားပါတယ္…) Part III လာပါၿပီ ...ထုံးစံအတုိင္းေပါ့ဗ်ာ... ဒီကားရဲ႕အညႊန္းကုိေတာ့ မေရးရဲလုိ႕မေရးေတာ့ဘူး... ကုိင္းခံစားႀကည့္လုိက္ပါဦးဗ်ဳိ႕...1080p 5.1CHနဲ႕ 720p တုိ႕အျပင္ 360p ေလးနဲ႕ အေကာင္းမြန္ဆုံးတင္ေပးထားပါတယ္.. ဘာသာျပန္သူကေတာ့ Ko Zuel Khant Thwinပဲျဖစ္ပါတယ္... File Size : (3.21GBGB) and (1.55GB ) Quality : Blu-Ray 1080p 5.1CH,Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…02:42:00 Genre : ...
The Unmatchable Match (1990) မင္းသားၾကီးစတီဖင္ေခ်ာင္ရဲ႕ 1990 ႏွစ္တုန္းကဇာတ္ကားျဖစ္ပါတယ္။စတီဖင္ေခ်ာင္ မ်က္ခြက္မေျပာင္ဘဲ အမွန္အကန္သရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ဇာတ္ကားဆိုရင္လဲ မမွားပါဘူး။အေယာင္ေဆာင္ရဲနဲ႔ စိန္သူခိုးတို႕ ခင္မင္သြားၾကရာကေန ဘာေတြဆက္ျဖစ္မလဲဆိုတာ..။IMDb (6.3) ပါ။ File size…(999 MB) and (490 MB) Quality…HD-Rip 720p Format…mp4 Duration….01:38:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung Translated by Lyric Lynn Khant